Kedu ihe bụ SMS? Nkọwa Ahịa Mobile
Thursday, July 16, 2015 Mọnde, Jenụwarị 16, 2017 Adam Obere
Kedu ihe bụ SMS? Gịnị bụ MMS? Gịnị bụ Koodu dị mkpirikpi? Gịnị bụ SMS Isiokwu? Na Mobile Marketing na-aghọwanye isi m chere na ọ nwere ike ịbụ ezi echiche ịkọwapụta ụfọdụ isi okwu eji na ụlọ ọrụ azụmaahịa mkpanaka.
SMS (Ọrụ Nje Ozi)- A ọkọlọtọ maka telephony ozi usoro na-ekwe ka izipu ozi n'etiti mobile ngwaọrụ na ndị mejupụtara obere ozi, ejikari na ederede naanị ọdịnaya. (Ozi ederede)
MMS (Ọrụ Izi ozi ọtụtụ) bụ ụzọ dị mma iji zipu ozi nke gụnyere ọdịnaya multimedia na site na ekwentị mkpanaaka.
Koodu kodị nkịtị (Koodu mkpirisi)- Obere onu ogugu (dika 4-6 digits) nke enwere ike iziga ozi ederede site na ekwentị mkpanaaka. Ndị debanyere aha na ikuku na-ezipụ ozi ederede na mkpụmkpụ mkpụmkpụ nwere mkpụrụ okwu dị mkpa iji nweta ọtụtụ ọdịnaya ekwentị.
isiokwu- Okwu ma ọ bụ aha eji amata ozi dị iche iche a Ọrụ Ọrụ Koodu.
Ndị a bụ ụfọdụ n'ime okwu ndị bụ isi eji mee ihe Izu ahia SMS. Ọbụna na nkọwa nke shortcodes ọtụtụ mmadụ ka chọrọ nkọwa ọzọ n'otú o si arụ ọrụ ọnụ.
M na-agbalị ịkọwa ya na usoro nke andntanetị na ngalaba aha. Chee echiche banyere a Shortcode ka yiri ngalaba aha na a isiokwu yiri ibe. Mgbe ịchọrọ ozi ọma ị nwere ike ịga na mpụ (Isiokwu) peeji nke CNN.com (Koodu mkpirisi).
Ma ọ bụ… ọbụna ka mma, mgbe ị chọrọ ịdenye aha site na email Martech Zone, ederede Marketing (Isiokwu) 71813. Gbalịa ya… nke ahụ bụ ederede ịdenye aha mwekota n'etiti ọrụ SMS anyị na CircuPress!
A pụkwara iji ozi ederede iji nye onyinye / kwụọ ụgwọ ma ọ bụ nyefee njikọ maka onye ọrụ mkpanaka iji lelee weebụsaịtị, mepee ngwa, ma ọ bụ lee vidiyo na ngwaọrụ mkpanaka ha.
Gịnị bụ SMS Marketing
Ụdị dị ka Ekwentị mkpanaka ekwe ka ndị ahịa kesaa isiokwu na shortcode maka ndị ọrụ iji denye aha na ozi ederede. Ebe ọ bụ na ederede ederede dị egwu, ọtụtụ ndị na-enye ọrụ chọrọ usoro opt-in abụọ. Nke ahụ bụ, ị dee ederede isiokwu na koodu dị mkpirikpi, wee nweta arịrịọ azụ na-arịọ gị ka ị banye na ọkwa na ozi ndị ahụ nwere ike ibute ụgwọ dabere na onye na-eweta gị. Usoro ndenye aha na-enye gị ohere ịtọọ ozi ederede ma lelee mkpesa na arụmọrụ dị mma.
A bụ ihe a video na ihe mere SMS Marketing dị nnọọ irè:
Nke a bụ nnukwu akụkọ ihe mere eme nke Text Text si NeonSMS:
* Nkọwa ndị a dị ka nke Otu Ahịa Ahịa. Nkọwa ndị ọzọ dị na Ekwentị mkpanaka.
Tags: circupressekwentị mkpanaakaKeywordsnkọwapụta mkpanakakoodu mkpirisiobere ozi usoroSMSSMS ahịasms oziederede ederede ahiaozi ederedeederede ịdenye ahatextingihe bụ koodu mkpụmkpụgịnị bụ sms isiokwugini bụ mmsgịnị bụ sms
Otu esi eji ihe omuma ihe omuma banyere ika gi na 2015
Jul 24, 2009 na 10:52 PM
Nnukwu foto, Adam! Anọ m na Nzukọ Nzuko Ntaneti na Houston na otu n'ime ndị na-eweta ihe jiri usoro a. Ọ gwara onye ọ bụla ka ederede adreesị ozi-e tinye ederede na koodu mkpụmkpụ ahụ ma ha ga-ezigara ha ihe ngosi ahụ.
Jul 25, 2009 na 3: 26 AM
Daalụ Doug! Nke ahụ bụ otu n'ime ọrụ anyị na-enye na Connective.
Ọkt 15, 2014 na 5:41 AM
Ndi Connective na-enyekwa njikọ API?
Ọkt 15, 2014 na 8:50 AM
Ee, Ekwentị mkpanaka nwere API zuru ezu.